Myanmar IT Resource Forum » ARTICLES ZONE » » Article Page » Gmail Back Up (or) Gmail Hacking(Gmail သုံးသူများအထူးသတိရှိရန်)[Article]
ဒီ နည်းလမ်းက ကိုယ့်ရဲ့ Password ကို အခြား တစ်စုံတစ်ယောက်ကို ပေးထားတတ်တဲ့ သူတွေအတွက် အရမ်းကို အန္တရယ်များတဲ့ နည်းလမ်းပါ။ မိနစ်ပိုင်းအတွင်းမှာ ကိုယ့် ထဲကရှိသမျှ Mail အားလုံးကို ကိုယ့် Email address password ကိုသိနေတဲ့ တစ်ခြားလူတစ်ယောက်က download ချသွားနိုင်ပါတယ်။ ဘယ်သူ ချတယ်ဆိုတာ ကိုယ့်ထဲမှာလည်း စစ်လို့မရဘူးနော်။ ဥပမာပြောရရင် [You must be registered and logged in to see this link.] က ကိုယ့်ရဲ့ mail ထားပါတော့ အခြား မသမာသူ တစ်စုံတစ်ယောက်က ကိုယ့်ရဲ့ Password သိနေတယ်ဆိုရင် အောက်ဖော်ပြပါ နည်းလမ်းအတိုင်း လုပ်သွားပါက ကိုယ့်ထဲကို Verification code ပါတဲ့ mail တစ်စောင်ပဲဝင်လာမယ်။ အဲဒီ mail ကိုလဲ အဲ့ဒီ မသမာသူ တစ်စုံတစ်ယောက်ကပဲ ယူပြီးတာနဲ့ ပြန်ဖြတ်သွားရင် ကိုယ့်အနေနဲ့ ဘာမှတောင် မသိလိုက်ရပဲ အားလုံးပါသွားလိမ့်မယ်။ အဟောင်းတွေ ပါသွားရုံတင် မဟုတ်ပါဘူး နောက်ထက် အသစ်တွေ ဝင်လာရင်လည်း သူ့ဆီကိုအလိုလို download ချနေမှာပါ။
ပြီးရင် အဲဒီ Email အသစ်ထဲကိုဝင်ပါ။ ဥပမာ.. [You must be registered and logged in to see this link.] ဆိုတဲ့ Mail ကို အသစ် လုပ်ထားသော Mail တစ်ခု ကနေ Download ဆွဲမယ်ဆိုပါစို့။
Re: Gmail Back Up (or) Gmail Hacking(Gmail သုံးသူများအထူးသတိရှိရန်)[Article]
on 18th January 2010, 9:15 pm by ET
on 18th January 2010, 9:18 pm by ET
မှတ်ချက်။ ။ အနာသိရင် ဆေးရှိ။ အမေးရှိရင် အဖြေရှိ ဆိုတဲ့အတိုင်း အသိနောက်ကျသွားလို့ ခံလိုက်ရသူတွေ၊ ကိုယ့် Email အချင်းချင်း Data တွေပြောင်းရွှေ့ရာမှ ရပ်တန့်ချင်သူတွေနဲ့ ကိုယ် Gmail ကို သံဿယ ရှိသူတွေ အတွက် ပြန်ဖြေနည်းတစ်ခု တော့ရှိပါတယ်။ ကိုယ် Password ပေးဖူးတဲ့ တစ်ယောက်ယောက် က ကိုယ့်ဆီက Email တွေကို အထက်ပါ နည်းအတိုင်း Download ချ သွားပြီ ဆိုပါဆို့။ အဟောင်းတွေ ပါသွားတာတော့ ဘာမှ မတက်နိုင်တော့ ပါဘူး။ အဟောင်းတွေ ပါသွားတာကို တားလို့မရပေမယ့် အသစ်တွေ သူ့ဆီမဝင်အောင် တားလို့တော့ ရပါသေးတယ်။ ဘယ်လိုတားမလဲဆိုတော့ နောက် post တစ်ခုတင်ပြီး ဖြေရှင်း ရေးသား ဖော်ပြ ပေးပါမယ်။ Gmail အသုံးပြုသူအားလုံး လုံခြုံ အစဉ်ပြေမှုများနှင့် ပြည့်စုံကြပါစေ။
on 5th June 2010, 10:57 am by panpadauk
တနေ့က ဘယ်ထဲက ကြည့်မိတာလဲမသိဘူး [You must be registered and logged in to see this link.] ထဲကနေ ကိုယ့်ဆီပို့လာတဲ့ G mail account တခုက ဘယ်နိုင်ငံကနေလာသလဲဆိုတာသိဖို့ရာအတွက် နောက်ဆုံးအဆင့်က ip address ကိုဘယ်နေရာမှာ စစ်ရမယ်ဆိုတာ မေ့သွားလို့ ပြန်ပြောပေးလို့ရမလား ပထမအဆင့်အနေနဲ့ကတော့ ip address ပါတဲ့မေးကတော့ spypig ကနေ ပြန်လာပါပြီ ip address လေးကို စစ်လို့ရမှ ဘယ်နိုင်ငံက ဆိုတာသိနိုင်မှာမလို့ အဲဒီလိပ်စာလေး သိရင်ပြောပြပေးပါလား
on 5th June 2010, 6:35 pm by kyawzwathant
အောက်ကပုံမှာ 1 မှာ IP ထည့်2မှာ ဘယ်နိုင်ငံက ဘယ် ISP ကနေသုံးနေလဲ ပြလိမ့်မယ်...
on 16th June 2010, 11:52 am by panpadauk